Ikhaya Kungani Ama-Untold Biography Amaqiniso
Kubalandeli bebhola, ukufunda nge-Biography yabathandi bebhola njalo kunomthelela, kushukumise, futhi kunikeze isikhuthazo. Yingakho amaqiniso ethu webhola lebhola le-Soccer Untold Biography ekhona !!
Ibhola njengoba sazi lingase lingapheli. Yize indlela umdlalo odlalwa ngayo uvele eminyakeni edlule, izindaba ezithokozisayo ezingayeki ukukhiqiza zingaqhamuka ezinkumbulweni zebhola aficionados izizukulwane ngezizukulwane.
Izindaba ezivame kakhulu ezenziwa ngabadlali, abaphathi nabakhethekile bezemidlalo ziyaxaka, zithinta, zivusa ingqondo futhi, noma yisiphi isichasiso esihle abafundi, izilaleli kanye nababukeli abangazihlanganisa ukuchaza imizwa edonsela phansi lezo zindaba ezinje zisungula ezingqondweni zabo.
I-Lifebogger iveza izindaba ezixakile mayelana nabadlali bebhola, abaphathi nabaphathi. Ama-Credits Wezithombe: LB.
Isici esibalulekile esenza izindaba ziqambe amanga ngenxa yokuthi azidluleli esidlule ukunakwa kwamapulatifomu wedijithali ochwepheshe afana I-Lifebogger okuyinto ebabazekayo kwezobuciko bokubhaliwe nobukhazikhazi bokuloba kwebhola eligxile emlandweni webhola lezinyawo.
At I-Lifebogger, siyaziqhenya ngathi njengomthombo oqeqeshiwe wedijithali wezindaba zeqiniso zeqiniso nezingaziwa ukuthi ziyingxenye yemibhalo emnandi esiyivezayo mayelana nabaphathi bezinhlanya zebhola emhlabeni kanye nabantu abaqokile emhlabeni wonke.
I-Lifebogger ingumthombo wedijithali owodwa wezindaba zebhola zeqiniso. Isikweletu Sezithombe: LB.
Kafushane nje, le ndatshana ihlose ukunika izethameli zethu umbono ophelele walokho esikwenzayo ngokwethula amaqiniso we-biography angaziwa, noma awaziwa kancane ngababambisi bebhola, abaphathi nabaphathi abaphezulu ngaphansi kwezihloko ezinemininingwane yokufundwa okuhle.
Kungani Izindaba Zobuntwana - Abaphathi bebhola abangazange badlale i-Professional Football
Ibhola aliyeki ukukhipha izinkolelo nemibono ethandwayo. Omunye wale mibono uthi abantu abangakaze badlale ibhola eliqeqeshiwe abakwazi - okubi kakhulu - babe ngabaphathi bebhola noma - baqhubeke kahle kumakhono okuphatha.
Njengoba nje izinkolelo ezishiwo ngaphambili zazibonakala ziba amaqiniso esayensi, UMaurizio Sarri uphume ebunzini lokuqala umsebenzi wakhe wokuqeqesha kuma-1990s ngeLigi Club AC Sansovino ephansi ngenkathi U-Andre Villas-Boas uqale njengomqeqeshi osizayo kuPorto ngase1990's sekwedlule isikhathi.
U-Andre Villas-Boas noMaurizio Sarri abaze badlale ibhola ezingeni lobuchwepheshe ngaphambi kokuthi baqale ukuqeqesha. Ama-Credits Ama-Image: WAGNH.
Kungani Ama-Untold Biography Amaqiniso - Abadlali bebhola ababenezikhundla nabaphathi
Izimali cishe zingenzeki emidlalweni yeqembu ikakhulukazi ebholeni lapho okwenziwa khona abadlali kuthonywa “ukushisa okwamanje”. Ngenkathi ukuqubuka kwesinye isikhathi noma isenzo sobutha esenziwa ngabadlali ngokumelene nabaphikisi babo sichithwa ngokuthi “ukuqhuba okuhle”, kungashiwo okufanayo lapho ubuhlakani bebhola buqala ukushisa kubaphathi babo.
Abalandeli beBarcelona bebengeke basheshe ukukhohlwa udweshu olude phakathi kwemenenja yekilabhu yakudala Pep Guardiola futhi phambili UZlatan Ibrahimovich ngokulandisa kokugcina ukuthi u-Guardiola ukhulume naye kabili ezinyangeni ze-6. Ngokuphikisana okuyinkimbinkimbi kakhulu, abalandeli beReal Madrid bahlukaniswe phakathi kokusekelwa Iker Casillas or Jose Mourinho lapho ama-duo ebenokuqhekeka ngaphezu kwalokho umqeqeshi akubona kungukukhaphela umgadli waseSpain.
UZlatan Ibrahimovich no-Iker Casillas bobabili baneziphikiso ezinde ezibuhlungu nabaphathi babo besikhathi esisodwa. Ama-Credits Wezithombe: LB.
Ngaphezu kwalokho, ababaningi abakukhumbulayo lokho UDavid Beckham Isimo sengqondo sokuziphatha ngokweqile kuManchester United sasihola umqeqeshi owayengumqeqeshi ngaleso sikhathi U-Alex Furgeson ukukhahlela ibhuththi e-superstar. Izicucu zezinyawo zimshaye kahle uBeckham ebusweni, okuyisigameko esamlimaza ekuhambeni kwakhe e-Real Madrid e2003.
Kungani Ama-Untold Biography Amaqiniso - Abadlali bebhola abanamakhadi abomvu kakhulu
Abalingisi abakulesi sigaba baqala kusuka kubahlaseli abasebenza kanzima kuya kubagxeki bezindawo ezisezingeni eliphakathi kanye nabadlali abahle abanokuphikisana nodlame futhi babonise ulaka lapho becasulwa kancane. Ngenxa yalokhu, banamarekhodi ashaqisayo okuqondiswa kwezigwegwe agunyazwa yizinkampani zamakhadi abomvu.
Ukuqala ngokuvikela kanzima abavikeli, USergio Ramos ifaka ishadi njengoba inamandla okuthumela kakhulu emlandweni weLa Liga. Noma sesithathe umhlalaphansi, USteven Gerrad phakathi kwabadlali abaphakathi kwamakhadi abomvu kunabo bonke abahamba ngaphansi komhubhe wase-Anfield ukugeza kwasekuqaleni.
USteven Gerrard noSergio Ramos bakleliswe phezulu ohlwini lwabadlali abaningi abathumelayo. Ama-Credits Wezithombe: LB.
Ukuqhubekela phambili esinakho Diego Costa isitayela sakhe sokudlala esinolaka asilokothi siyeke ukumfaka enkingeni onompempe nomaphi lapho eya khona. Eqinisweni, ubonwa njengengozi elinde ukwenzeka noma nini lapho ezama ukuthola abantu abamvikela.
Kungani Ama-Untold Biography Amaqiniso - Abadlali bebhola Abangama-Polyglots
Ukutshala imali eningi ekuziqeqesheni ukuze akwazi kahle ubuciko be-gameplay enhle, abanye abadlali bahambe amamayela amaningi ukujabulisa abalandeli ngokufunda ulimi lwemiphakathi yabo ebamba iqhaza. Umzamo awenzanga nje ukuthi ubuhlakani bebhola bube ngcono kakhulu emphakathini wabo kepha ubabeke njengezintandokazi zezindima zokuphatha lapho sebethathe umhlalaphansi.
Ngaphandle kwe-ado eningi, abadlali abakwaziyo izilimi eziningi bafaka unozinti Peter Cech osuka e-Czech odabuka kulo ukhuluma iSpanish, isiJalimane, isiFulentshi nesiNgisi. Ngokwakhe, UHenrykh Mkhitaryan ukhuluma kahle isi-Armenia, isiPhuthukezi, isiFulentshi, isiNtaliyane, isiRussia, isiNgisi nesiJalimane.
Okokugcina kodwa nakanjani akuyona okungenani Romelu Lukaku okufakazela ukuthi ungumfanekiso ophelele we- “hyperpolyglot njengoba ekhuluma ngezilimi ezingekho ngaphansi kwe-8. Kubandakanya isiFulentshi, isiLingala, isiDashi, iBelgium, isiCongo, isiSuthu, iSpanishi, isiNgisi, isiPhuthukezi nesiJalimane.
URomelu Lukaku, uHenrikh Mkhitaryan noPeter Cech bangama-polyglots ahlaba umxhwele ebholeni. Ama-Credits Wezithombe: LB.
Kungani Ama-Untold Biography Amaqiniso - Abadlali bebhola nabaphathi abaye bathola ama-Degree emfundo ephakeme
Indlela ezinye izingqangi zebhola ezikubona ngayo, ukubamba iqhaza ngokuzinikela ebholeni akukuvimbeli ukutholwa kwezifundo eziphakeme, umbono ophumelelayo obabone beqhubeka nokubhalisela iziqu zasekolishi futhi baphothule izifundo zabo lapho bephothula izinhlelo zabo.
Umdlali wase-Italy Giorgio Chiellini Ufaka uhlu lokuthweswa iziqu e-University of Turin nge-Master Degree in Business Administration. Ngoba Juan MataUkuba ne-degree ezimbili - eyodwa kwezokumaketha kanti enye kwisayensi yezemidlalo - akwanele. Unentshisekelo yokufunda i-Psychology ngesikhathi sokubhala.
Esigabeni sabaphathi, uyakwazi lokho UFrank Lampard uneziqu ngesiLatin ngenkathi UVincent Kompany uneziqu ze-masters ekuphathweni kwebhizinisi kusuka e-Alliance Manchester Business School? Ngempela ababambisi bebhola kungenzeka bangabi nedumela lobuhlakani, kepha abadlali abasetshenziswe ngaphambili kanye nabaphathi banegalelo elikhulu ekuguquleni ukulandisa.
Izinsimbi ezinamathalente. Kuvela kuLR Giorgio Chiellini, Vincent Kompany, uFrank Lampard noJuan Mata, Ama-Credits e-Image: LB.
Kungani Ama-Untold Biography Amaqiniso - Banikazi Beklasi Abacebile
I-English Premier League isibe yindawo yokudlala yabagidigidi abathenga amaklabhu futhi bacishe ukheshi ongakwesobunxele, kwesokudla nendawo. Ngokuphathelene neYurophu, kufanele kube ngumnikazi wekilabhu ocebile kakhulu ngesikhathi sokubhalwa nguSaher Monsour, indoda eyathenga iMan City.
Hlangana noSheikh Monsour- Umnikazi wekilabhu ocebile kunabo bonke eNgilandi. Ikhredithi ku- Guardian & Minand
U-Asides nokuba ngumnikazi wekilabhu, uSakhile ubuye abe yinkosi yase-Emirati futhi oyiphini likandunankulu wase-United Arab Emirates, ungqongqoshe wezindaba zikamongameli futhi oyilungu lomndeni wasebukhosini buka-Abu Dhabi. Ungumfowabo wengxenye kaMongameli we-UAE, uKhalifa bin Zared Al Nahyan.
Ngemuva kwendoda ecebile ebholeni kuza uJoseph UJoe Lewis oyisazi sebhilidi esidumile saseBrithani esingumnikazi weSpurs.
UJoe Lewis (kwesobunxele), ongumnikazi weSpurs ungomunye wamadoda acebile e-UK
Wena we-mush uzwile ngoDanial Levy, kepha uJoe Lewis uyindoda ngemuva kweSpurs futhi nguye oqoke uLevy njengosihlalo wekilabhu.
Ekugcineni kunjalo I-Roman Abramovich, owaziwa kakhulu ngaphandle kweRussia njengomnikazi weChelsea FC Unguyena ophikisana nomuntu owaguqula iChelsea kusuka ohlangothini lwePremier League yaba yisikhulu saseYurophu.
Iningi labalandeli beChelsea e-England nasemhlabeni jikelele, Abramovich sekufakazele ukuthi kungenzeka ukuthenga injabulo.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Nei yethu ye-Untold Biography. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.